देशको समाचार Archives | INRA ONLINE MEDIA
Category: देशको समाचार
खण्डग्रास सुर्यग्रहणमा भोली बिदा नहुने – गृह मन्त्रालय
काठमाण्डौं, पुस ९ गते । पुस ९ गते लाग्ने खण्डग्रास सुर्यग्रहणमा सार्वजिनक विदा नहुने भएको छ । पुस १० गते लाग्ने खण्डग्रास सुर्यग्रहणमा सार्वजनिक विदा हुने भनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हल्ला फैलिएपनि सार्वजनिक विदा नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजविराज– सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–७ मा स्थानीय तहअन्र्तगत वडाध्यक्ष पदका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि मतदान शुरु भएको छ ।
शान्तिपूर्ण वातावरणमा वडाध्यक्ष पदका लागि मतदान शुरु भइसकेको र मतदाता मतदानस्थलमा आउने क्रम जारी रहेको सप्तरीका प्रहरी उपरी…
October 8, 2019 KR NEWS
२१ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ९० वर्षीय पिता भोजप्रसाद भट्टराईको हातबाट टिका ग्रहण गरेका छन् ।
विजया दशमीको उपलक्ष्यमा टिका ग्रहण गरेको फोटा राख्दै डा. भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेक…
October 1, 2019 KR NEWS
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार उपसभामुख समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो चरित्रमा प्रश्न उठाई लगाइएका आरोपबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहयोग पुगोस भनी राजीनामा दिएको महराल…
लगातारको भारी वर्षापछि सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रमजारी छ । बहाव बढेसँगै नेपाली भूभाग थप डुबानमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
सप्तकोशीमा आएको पानी रोक्नका लागि ब्यारेजका ढोका थुन्न भारतले दवाव दिएको समाचार आईरहेका…
काठमाडौं । मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ३० हजार जनाभन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष रुपमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा खटिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा ६ हजार ३०५, प्रदेश …
June 24, 2019 KR NEWS
काठमाडौँ – भोली असार १० गते मंगलबार नेपाल बन्द हुने भएको छ । बेला बखतमा नेपाल बन्द गर्दे आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले असार ७ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रमा गर्दे आएको र भोली १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको हो ।
April 28, 2019 KR NEWS
सिरहा : प्रदेश २ सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेको छ। तर प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले नै अभियानको खिल्ली उडाउँदै एक दलित बालिकाको विवाह गराएका छन्।…